စိတ္​က်န္​းမာ​ေရး — Steemkr
goldbloger834 in esteem
လက်ထပ်သို့မဟုတ်သူ၏အိမ်ထောင်ဖက်သေဆုံးခဲ့ပါသည်ဖူးဘူးသူတွေကို Neurology Neurosurgery & စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်ထဲမှာအသစ်တခုပြန်လည်သုံးသပ်သည်နှင့်အညီ, လက်ထပ်လူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်နှောက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တခါဖြစ်သကဲ့သို့တစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်းကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အဖြစ်ကြီးတွေမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွေ့။ အသစ်စက္ကူဥရောပ, မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိကနှင့်အာရှရှိထက်ပို 800,000 လူတွေပါဝင်သော 15 ဦးကိုယခင်ကထုတ်ဝေလေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထားကြည့်ပါတယ်။ ဒေတာပေါင်းစပ်ခဲ့သည်နှင့်အသက်အရွယ်နှင့်ကျား, မအပါအဝင်အချက်များစွာများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်တဲ့အခါ, University College London မှထံမှသုတေသီများလက်ထပ်တစ်ခါမျှသူတွေကိုလက်ထပ်လူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်နှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ 42% ပိုများပါတယ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်နှင့်မုတ်ဆိုးမတို့ကိုနှင့်မုဆိုးမ 20% ပိုများပါတယ်ခဲ့ကြသည် ။
အခွားသောသုတေသနအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူလူသူတို့မရှိဘဲများထက်ပိုမိုကျန်းမာဖြစ်လေ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒါကတွေ့ရှိချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရှင်းပြစေခြင်းငှါ, သုတေသီဆိုအိမ်ထောင်သည်စုံတွဲ, လေ့ကျင့်ခန်း healthfully ကိုစား, လူမှုရေးဆက်ဆံမှုများနှင့်မီးခိုးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်များအတွက်အနိမ့်အန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းလျော့နည်း-ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသောက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကလှုံ့ဆျောနိုငျသညျ။ အိမ်ထောင်ဖက်၏အသေခံခြင်းဝမ်းနည်းလည်းဦးနှောက်မှာရှိတဲ့အာရုံကြောအချက်ပြထိခိုက်စေခြင်းနှင့်သိမြင်မှုစွမ်းရည်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်သောသူတို့ကား, စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ တစ်ခုပူးတှဲပါအယ်ဒီတာအဖွဲ့, စင်္ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကနေသုတေသီများနှင့်ဟောင်ကောင်ရဲ့တရုတ်တက္ကသိုလ်၏စာရေးဆရာများလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပိုကောင်းသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်လက်မထပ်ရသေးသို့မဟုတ်မုဆိုးမကလူလျော့နည်းလိင်ရှိစေခြင်းငှါဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကြောင်းထောက်ပြနေသည်။ အဆိုပါသတင်းသို့သော်လက်မထပ်ရသေးလူတို့အဘို့အားလုံးမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ သုတေသီ 1927 ပြီးနောက်မွေးဖွားသောလူပါဝင်သည်ရာ, သာလတ်တလောလေ့လာမှုတွေမှာကြည့်ရှုသောအခါ, တစ်ခုတည်းသောလူများအတွက်စိတ်ဖောက်ပြန်၏တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုသာ 24% လက်မထပ်ရသေးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယခင်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းဖြစ်သကဲ့သို့အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်အကြီးအမပြုစေခြင်းငှါ -suggesting ဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားလူမှုအခါကတစ်ခုတည်းနေဖို့သူတွေကိုအခက်အခဲဆက်သွယ်ဒါမှမဟုတ်အတိတ်ကာလ၌မိမိတို့-အထူးသဖြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်အတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်တူနှောက်အဘို့အမြင့်မားအန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုထားကြောင်းသိမြင်မှုစရိုက်များ, ရှိစေခြင်းငှါ, ထိုသူတို့စက္ကူထဲမှာရေးဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ စံ။
"လက်မထပ်ရသေးလက်ကျန်ပိုပြီးဘုံဖြစ်လာနေပါတယ်" ဟုသူတို့က, ရေး "နှင့်က 20 ရာစုအဆုံးစွန်သောဝက်အတွင်းမွေးဖွားတစ်ခုတည်းကလူနည်းပါးလာပုံမှန်မဟုတ်သောသိမြင်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ " အဆိုပါသုတေသီများကွာရှင်းခဲ့ကြသည်သူတွေကိုအဘို့အနှောက်မရှိတိုးမြှင့်အန္တရာယ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကကြောင့်လေ့လာမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကွာသောလူများ၏အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ခဲ့ကြပေမည်, သူတို့ကဆိုကြသည်။ လေ့လာမှုစူးစမ်းခဲ့ကြသည်သောကြောင့်, သူတို့သာအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်အန္တရာယ်ကြားက link တစ်ခုမဟုတ်ဘဲအကြောင်းမရှိ-and effect ကိုကြားဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသုတေသီများလည်းအသင်းအဖွဲ့၏သဘောသဘာဝကိုပိုမိုသဲလွန်စပေးထားကြပေမည်သည့်ကွာရှင်းသို့မဟုတ်မုဆိုးမခဲ့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးလူတွေကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သို့သော်လေ့လာမှုကွဲပြားခြားနားသောလူဦးရေနှင့်အချိန်ကာလကိုဖြတ်ပြီး link တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုသုတေသန၏ခွန်အားကိုထောက်ပံ့ခြင်း, စာရေးဆရာများကဆိုသည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်စိတ်ဖောက်ပြန်-ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲပိုပြီးအလုပ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြု, သူတို့က, ရေး "နှင့်ဤမုတျဆိုးနှင့်ရာသက်ပန်တစ်ခုတည်းလူမျိုး၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်အုပ်စုများအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်ညွှန်ပြ။ " အယ်ဒီတာအဖွဲ့၏စာရေးဆရာများအိမ်ထောင်ရေး status ကိုတစ်ဦးကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်း, အနိမ့်ပညာရေး, သွေးတိုးရောဂါနှင့်ကြားနာအရှုံးကဲ့သို့ထူထောင်သူတွေကိုအတူ, စဉ်းစားရန်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုအတွက်အရေးပါသောအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သို့သော်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်အကွံဉာဏျသို့, ဤတွေ့ရှိချက်ဘာသာပြန်ဆိုစိန်ခေါ်ပါလိမ့်မည်, သူတို့ကဆိုကြသည်။ တဦးတည်းအဘို့, အိမ်ထောင်ရေး status ကိုအစဉ်အမြဲ (ကအိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့သေမင်း၏အမှု၌, ဥပမာ) အရှေးခယျြမှုမျှမက, လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရေ Co-နေရာအရပ်သည်ထက်ပိုသောလူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်လာကြပါပြီအဖြစ်အပြင်, လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အဖွဲ့အစည်း, လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ သူတို့ကအစထိုကဲ့သို့သောလူမှုရေးအထီးကျန်နှင့်စိတ်ကျရောဂါအဖြစ်အချက်များပြီးသားစိတ်ဖောက်ပြန်မှုအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေဖို့မသိ, ဤ inextricably တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်မုဆိုးမဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်နေနိုင်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြ။ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေကဤပြီးနောက်အရေးကြီးသောဆက်လက်တည်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အခြားအန္တရာယ်အချက်များလုံးဝအဘို့မှတ်ခဲ့ကြသည်ရှိမရှိ "ဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲ," သူတို့ကရေးသားခဲ့သည်။ အသစ်သောစွန့်စားမှုအကြောင်းရင်းများ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအရေးကြီးပါတယ်နေစဉ်အယ်ဒီတာအဖွဲ့စာရေးဆရာများ add, သေးစိတ်ဖောက်ပြန်အလွယ်တကူကာကွယ်နိုင်သောကြောင်းကိုမဆိုလိုပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သူတို့ကဆိုသညျကား, ကသုတေသနအခြေအနေကို destigmatize နည်းလမ်းများအဖြစ်ပထမဦးဆုံးရာဌာန၌ရောဂါကာကွယ်တားဆီးဖို့နည်းလမ်းတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆက်လက်အရေးကြီးပါတယ်။
laathtaut shoetmahote suueat aainhtaunghpaat say sone hkaeparsai hpuu bhuusuutwayko Neurology Neurosurgery & hcaterawgar kusamhu eat gyaarnaal htellmhar aasait tahku pyanlaisonesaut sai nhanganye, laathtaut luutwayko nhaine yhain nhaout hpwanhpyaoe sell eat toemyahaint aantararal mhar shipartaal . darpaymaae tahkar hpyit sakaeshoet taithkutaee hpyithkyinn kyannmarrayyaantararal aahpyit kyeetway m hpyithcay hkyinn nghaar, hkwalhkyamhcatehpyaarhkyinn twae . aasait hcakkuu urawp, myawwataamayrik nhaint taung aamayrik nhaint aarsh shi htaatpo 800,000 luutwayparwainsaw 15 u ko yahkaink htoteway laelarmhumyarranay hpyint aahtoutaahtarr kyi partaal . day tar paungghcaut hkaesai nhaint aasaataarwal nhaint kyarr, m aaparaawain aahkyetmyarrhcwar myarraatwat hteinhkyaotehtarr hkaesai taeaahkar, University College London mha htanmha sutaysemyarr laathtaut taithkarmyaha suutwayko laathtaut luutwayko nhaine yhain nhaout hpwanhpyaoetoetaathphoet 42% po myarrpartaal kyaungg twaeshi hkaerasai nhaint mote soe m thoetko nhaintmusoem 20% po myarrpartaalhkaekyasai . aahkwarr saw sutaysan aainhtaunghpaat nhang aatuu luu suuthoet mashibhell myarrhtaat pomo kyannmar hpyit lae kyaungg pyasahkaesai . dark twaeshihkyet eat taithcatetaitpine ko shinnpya hcay hkyinn nghaar, sutayse so aainhtaungsai hconetwal, lae kyinthkaann healthfully ko hcarr, luumhurayy saatsanmhu myarr nhaint meehkoe ko hteinsaimraan nhaint hcate hpoutpyan myarraatwatani m aantararal nae saathcautnaytae hpyitkyaungg lyawwnaee- hkautsaimsawarar thoetko sout tait u hkyinn hce k tahkyarr k lhuan syaww nongya s nyya . aainhtaunghpaat eata say hkan hkyinn wamnaee laee u nhaout mharshitae aarronekyaww aahkyet pya htihkite hcay hkyinn nhaint simyin mhu hcwmrai aayhaat hpyitninesai saw suuthoet karr, hcatehpihceemhu aasaint saint toemyahaint payynine sai . taithku puu thaell par aaaldetaraahpwal, hcain kar puu aamyoesarr takkasol k nay sutaysemyarr nhaint haungkaung rae tarote takkasoleat hcarrayysararmyarr laee liinpinesinerar lhuutsharrmhu pokaungg simyin mhu lotengaann saung tar nhaint laatm htaut rasayy shoetmahote musoem k luu lyawwnaee liin shi hcay hkyinn nghaar saathcaut lyetshisai kyaungg htoutpya naysai . aasopar satainn shoetsaw laatm htaut rasayy luu thoetabhhoet aarrlone makaunggtae mahoteparbhuu . sutayse 1927 pyeenout mwayhpwarr saw luu parwainsai rar, sar laattalaw laelarmhutway mhar kyany shu sawaahkar, taithkutaeesaw luu myarraatwat hcate hpoutpyan eat toemyahaint hcw ant hcarrmhusar 24% laatm htaut rasayy hpyithkyinn kyount yahkain saalhcunhait myarrhcwar aatwin hpyit sakaeshoet aantararal aahkyet aahpyitakyeeamapyu hcay hkyinn nghaar -suggesting hpyithkaesai . laathtaut htaim myarr luumhu aahkar k taithkutaee nayhphoet suutwayko aahkaataahkell saatswal darmhamahote aatate karl mimithoet- aahtuu s hpyint hcain hcarr tway hkaw aatwat pyaungg lwal pyin lwal hpyithphoet ninehcwm mashihkyinn nhaint tuu nhaoutabhhoetamyang marr aantararal mhar suuthoetko htarrkyaungg simyin mhu hcaritemyarr, shi hcay hkyinn nghaar, hto suuthoet hcakkuu htellmhar rayy hpyitnine parrae hcan . " laatm htaut rasayy laatkyaan popyee bhone hpyitlar naypartaal" hu suuthoet k, rayy " nhaintk 20 rarhcuasone hcwan saw waat aatwin mwayhpwarr taithkutaee k luu naeeparrlar ponemhaanmahotesaw simyin mhu nhaint koraikosway wisays lakhkanarmyarr shisai hpyitninesai . " aasopar sutaysemyarr kwarshinn hkaekyasai suutwaykoabhhoetanhaout mashi toemyahaint aantararal twaeshihkae partaal . dark kyawwng laelarmhumyarr twin parwain paatsaat kwar saw luu myarreat aatawlayy sayy ngaal tae aarayaatwat hkae kya pay mai, suuthoet k sokyasai . laelarmhu hcuuhcam hkaekyasai saw kyawwng, suuthoet sar aainhtaungrayy aahkyayaanay nhaint hcate hpoutpyan aantararal kyarrk link taithku mahotebhell aakyaunggmashi-and effect ko kyarr saatsanrayy ko sharhpway ninemai hpyitsai . aasopar sutaysemyarr laee aasainn aahpwaleat sabhawsabharw ko pomo selllwanhc payyhtarr kya pay mai sany kwarshinn shoetmahote musoem hkae aabhaalmyaha karlapaatlone luutwayko aakyaungg satainnaahkyetaalaat shisai mahote hkae pay . shoetsaw laelarmhu kwalpyarr hkyarrnarr saw luu u ray nhaint aahkyanekarlakohpyatpyee link taithku twaeshihkae sotae aahkyetko sutaysan eat hkwanaarr ko htoutpan hkyinn, hcarrayysararmyarr k sosai . aasopar twaeshihkyet hcate hpoutpyan- kyaotainkarkwalrayy maharbyauuhar hpwanhpyaoe sell popyee aalote bhhoet loaautkyaungg aakyaanpyu, suuthoet k, rayy " nhaint i mu tya soe nhaint rarsaatpaan taithkutaee luumyoe eat myint marr saw aantararal aotehcumyarr aahtuu s hpyint aarayykyeesaw hpyitninesai nywhaan pya . " aaaldetar aahpwaleat hcarrayysararmyarraainhtaungrayy status ko tait u kolaatlhuutsharrmhu mashihkyinn,ani m panyarrayy, swaytoerawgar nhaint kyarrnar aashone kaeshoet htuuhtaung suutwayko aatuu, hcain hcarr raan hcate hpoutpyan mhuaatwat aarayyparsaw aantararal aahkyet hpyithcay hkyinn nghaar aakyaanpyu aautparsai . shoetsaw lotengaann aakaungaahtaihpawraanakwan nyar nya shoet, i twaeshihkyet bharsarpyanso hceinhkaw par lain mai, suuthoet k sokyasai . t u taeeabhhoet, aainhtaungrayy status koahcainaamyaell ( k aainhtaunghpaat rae say mainn eata mhu , upamar)ashayy hk yyaya mhu myaha m k, liintuuhkyinn laathtauthtaimmyarrhkyinn nhainttaitkoray Co- nayrar aaraut sai htaat po saw luumhurayyaar laathkanninehpwal hpyitlar kya parpye aahpyit aapyin, laathtaut htaim myarr eataahpwal aahcaee, shinmyanhcwar pyaungglell hkaeparsai . suuthoet kahc htokaeshoetsaw luumhurayy aahteekyaan nhaint hcatekyarawgar aahpyit aahkyetmyarr pyeesarr hcate hpoutpyan mhu aantararalko toepwarr hcayhphoet masi, i inextricably taithkutaee shoetmahote musoem hpyithkyinn nhaint aatuu saatnwal naynine hpyitkyaungg htoutpya . aainhtaungrayy aahkyayaanay k i pyeenout aarayykyeesaw saatlaat taishi maihpyitkyaungg nhaint aahkyarr aantararal aahkyetmyarr lonewabhhoet mhaat hkaekyasaishimashi " sonehpyatsai hkanr hphoet hpyitnaysell," suuthoet k rayysarrhkaesai . aasait saw hcw ant hcarrmhu aakyaunggrainn myarreat sharhpwaytwaeshimhu aarayykyeepartaal nayhcain aaaldetaraahpwalhcarrayysararmyarr add, sayy hcate hpoutpyan aalwaltakuu karkwalninesaw kyaunggko masolopar . i aakyaungg kyawwng, suuthoet k so s nyya karr, k sutaysanaaahkyayaanayko destigmatize naeelammyarr aahpyit pahtam u sone rar htarn rawgar karkwal tarrsee hphoet naeelamtwayko aarronehcite hphoet saatlaat aarayykyeepartaal .
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by goldbloger8 from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.